Dagaal Nabad Lagu Raadinayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dagaal Nabad Lagu Raadinayo
Uppdaterat onsdag 13 april 2011 kl 15.30
Publicerat onsdag 13 april 2011 kl 12.47
Filim musalsal ah ee ciidanka Iswiidhen ee Afgaanistaan
Sawirle: Wêne: Scanpix
Toban sannadood dabadeed oo ciidammo ka tirsan dalkan Iswiidhen markii ugu horeeysey ey ka hoowl-galeen dalka Afgaanistaan ayaanay xaaladdooda ammaan ee dalkaasi ka darreeyn sida ay maanta tahay. Sannadkii tagay ee 2010 ayaa carrigaa lagu dilay saddex ka mid ah ciidammada dalkan kaga sugan Afgaanistaan, iska-horimaadkuna aad kor ugu kacay sannadihii ugu dambeeyey.
Barnaamij taxane ah ee laga sii deeyn doono idaacadda la iska daawado ee dalka Iswiidhen ayey qaar ka mid ah ciidanka dalkan kaga sugan goobtaa ey sheegeen in aan sawir dhab ah hayadaha wararka ee dalkani aaney ka bixin waxyaabaha carriga Afgaanistaan ka socda. Barnaamijkan taxanaha ah looguna magac daray ”Dagaal nabad lagu doonayo” uu caawa qaybtii ugu horeeysay ka bixi doontaa sagaalka fiidnimo idaacadda la iska daawado ee SVT1.
Maamulku kama aannu soo bixin inuu sawir dhab ah ka bixiyo sida xaaladda dhabta ahi tahay, waana mid loo baahan yahay maadaama halkan ciidan loo soo diray in sawir dhab ah laga bixiyo. Sidaasi waxaa sheegay Erik, kana mid ah madaxa ururrada ciidan ee dalkan kaga sugan Afgaanistaan, kana mid ah barnaamijka idaacadda la iska daawado ka bixi doona laga bilaabo caawa.
Barnaamijkan taxanaha ah ayey labada suxufi ee Johan Mork iyo Mattias Flink u raadgalayeen muddo 12 toddobaad gaarsiisan ciidanka dalkan kaga sugan Afgaanistaan. Waxaa isaguna sidoo kale ka qayb qaatay filinkan gaashaanle Fredrik Cederholm, kana howlgalay carrigaa saddex jeer ee kala duwan. Mise la qabaa gaashaanluhu sida ciidammada qaarkood sheegeen in aan sawir dhab ah laga bixin xaaladda ciidammada ee dalkan kaga sugan Afgaanistaan?
- Waxay ila tahay in war-bixinta ama sawirka dhabta ah la hayo – wasaaradda difaacuna war-bixin dhab ah gudbiso. Hase yeeshee aaney hayadaha wararka iyo bulshadu gelin maskaxdooda.
Soo saaraha barnaamijkan Johan Mork ayaanay ula muuqan in hayadaha wararku sawir dhab ah ka bixiyaan dagaalka ka aloosan dalka Afgaanistaan.
- Waa saddex illaa iyo afar sadar, laguna macneeyo in ciidanka Iswiidhen carrigaa kaga sugan la xabadeeyey / weerar loo geeystey iyaguna dib ugu jawaabeen. Mana jiraan cid ku dhaawacantay, laakiinse aan la shaacin iney ku dhinteen qaar ka mid ah dadyoowgii xabadda soo wiifiyay. Waana mid muhiim u ah labada dhinacba kuwa weerarka bilaabay iyo milateriga dalka ku soo noqon doona ee ka howl-geli doona.
Ciidanku waxay dagaal kula jiraan Talibaanka, sidoo kale waxaannu la kulanaa nolol-maalmeed kale, sida uu sheegey gaashaanle Fredrik Cederholm.
- Nolol-maalmeed ayaa carigaa qudhiisa ka jirta. Waxa aannu haynana waa hoowl la mid ah howlaha. Waxay maalintu isugu jiri kartaa filim la daawado, cayaar la cayaaro, qaxweeyn iyo wixii la mid ah.
Maxay haddaba ka qabaan bulshada afgaanku joogitaanka ciidammada qalaad ee dalkooda? Waana mid uu Johan Mark isku dayay sidii uu wax uga ogaan lahaa, hase yeeshee ay adag tahay marka aad ciidanka la socoto. Markiise ey si gaar ah bulshada u iskood u dhex-qaadeen iyaga oo aannu ciidan la socon jawaabo ka duwan ayey heleen.
- Laba bilood kadib ayaan ogaanay. Intaan ciidanka ku dhex milneeyn waxey jawaabta nala siiyaa ahayd: Haddaad tagtaan waxaa imanaya Tlibaan waanayna na dilayaan. Dabadeed waxaan kireeysanay tarjubaan iyo gaari oo aan bulshadii ku dhex-galley, iyadoona aannu ogaanay jawaabo oranaya: Toban sannadood ayaad iminka dalka ku sugneeydeen. Wax is-bedel ahina ma aaney dhicin. Waabay ka sii dartay xaaladdu. Shaqo ma haysano. Waxaannuna u baahannahay camal.
Fredrik Cederholm ayaa aaminsan in fikirrada ay bulshada afgaanku u sheegaan ey saameeyn ku yeelan karaan maadaama uu ka mid yahay ciidanka, hase yeeshee isla-markaana qaba iney heystaan taageero ballaaran ciidammada ajaaniibta ee dalkaasi howlha ka fulinaya.
- Afgaanka aan la kulmaa aad ayey ugu qanacsan yihiin in ciidan ajanbi ahi uu dalkooda ku sugan yahay, waase marka aan la shaqeeynayo ciidanka afgaanka, markaana waa ciidan dhan raacsan ee aan fikirkooda sidii ey doonaan u sheegan kara. Waxaanse qabaa sida ey aniga ila tahay in badankood bulshada afgaanku raali ku yihiin joogitaanka ciidammada caalamiga ee dalkooda.